भारतमा बर्डफ्लू देखिएपछि नेपालमा उच्च सतर्कता - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २३ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०८:४६
भारतको नेपाली सीमा क्षेत्रमा कुखुरामा बर्डफ्लू देखिएपछि नेपालमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। हालसम्म नेपालमा बर्डफ्लू अर्थात् एचफाइव एन वान देखिएको छैन। तर नेपालमा एभिएन इन्फ्लुन्जा एचनाइन लो प्याथोजेनिक संक्रमणले ठूलो संख्यामा कुखुरा मर्ने र उत्पादन घटेका कारण कृषक चिन्तित छन्।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा विमलकुमार निर्मलका अनुसार नेपालका कुनै पनि क्षेत्रमा हालसम्म बर्डफ्लू देखापरेको छैन। यद्यपि भारतीय सीमा क्षेत्रमा बर्डफ्लु देखिएका कारण त्यसका निकटमा रहेका नेपालको रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी र चितवन जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। बिहीबार उच्चस्तरीय प्राविधिकको बैठक बसी आजबाटै सहसचिवको नेतृत्वमा ती जिल्लामा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
प्रयोगशाला र सर्वेक्षणको समूहले स्थलगत रुपमा उच्च जोखिममा रहेका जिल्लामा अनुगमन गर्नेछ। ती जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको बर्डफ्लु नियन्त्रण समन्वय समितिको बैठक बसी उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि काम थालेको उनले बताए।
केन्द्रीय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला टेकुका प्रमुख डा. डिकरदेव भट्टले बढी मात्रामा चितवनबाट नमूना आइरहेको बताउँदै हालसम्म बर्डफ्लुको समस्या नदेखिएको बताए। उनले भने, ‘जे जति नमूना आएका छन्, सबै एचनाइनका छन्।’ एचनाइनसँगै भाइरल, ब्याक्टेरियल र माइक्रोप्लाज्माको संक्रमण भएकाले कुखुरा मर्ने क्रम बढी भएको उनले जानकारी दिए। जैविक सुरक्षा अपनाएर कुखुरा बचाउनु नै अहिलेको उत्तम उपाय रहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय पक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरका प्रमुख डा दयाराम चापागाईले हालसम्म नेपालमा गरिएको नमूना परीक्षणमा लो प्याथोजेनिक एचनाइन भेटिएको बताए। देशका विभिन्न क्षेत्रबाट लो प्याथोजेनिक शंकास्पद देखिएमा यहाँ नमूना परीक्षण गर्ने गरिन्छ। थप शंका लागेमा यहाँबाट केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाइँदै आएको छ।
चापागार्इंका अनुसार एचनाइनमा संक्रमणपछि खाना घटाउने, अण्डा उत्पादन आधा घट्ने र सात आठ प्रतिशत कुखुरा मर्ने गर्छन्। कतिपय खोरमा अहिले त्योभन्दा बढी कुखुरा मरेका कारण एचनाइनको मल्टिइन्फेक्सन भएका कारण हो। बर्डफ्लु हुँदा भने तीन चार दिनमै शतप्रतिशत कुखुरा मर्ने गर्छ भने यो रोग मानिसमा पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ।
उनले भने, ‘एचनाइन सिंगल भएको भए मृत्युदर कम हुन्थ्यो, मल्टी इन्फेक्सन भएर मृत्युदर बढ्दै गएको हो।’ जिल्लाबाट संकलित नमूना परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएकामा एचनाइन प्रमाणित हुँदै आएको उनले जानकारी दिए।
पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले नेपालमा एचनाइन भ्याक्सिन ल्याउन नपाएका कारण यसले ठूलो क्षति किसानले व्यहोर्नु परेको बताए। केहीले लुकीछिपी भ्याक्सिन ल्याउने गरेको भन्दै उनले सहजरुपमा भ्याक्सिन ल्याउन पाएमा यति ठूलो क्षति किसानले व्यहोर्न नपर्ने बताए। उनले भने, ‘हरेक वर्ष नेपालमा रु एक अर्ब हाराहारी एचनाइनका कारण नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ।’
नेपालमा पोल्ट्री क्षेत्रमा रु ७० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको व्यवसायी बताउँछन्। रासस